Ny rakitra xxx.docx dia tsy azo vohaina satria misy olana amin'ny atiny
Home Products DataNumen Word Repair Ny rakitra xxxx.docx dia tsy azo sokafana satria misy olana amin'ny atiny
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny "Ny rakitra xxxx.docx tsy azo sokafana satria misy olana amin'ny atiny" Error
Rehefa manokatra tahirin-kevitra Word simba amin'ny Microsoft Word 2007 na ny dikan-teny avo kokoa dia hitanao izao hafatra diso izao:
Ny rakitra xxx.docx dia tsy azo sokafana satria misy olana amin'ny atiny.
(Andininy: simba ny rakitra ary tsy azo sokafana.)
izay 'xxx.docx' no fisie rakitra rakitra Word.
Tsindrio ny bokotra "OK", ho hitanao ny hafatra diso faharoa:
Nahita atiny tsy voavaky tao amin'ny xxx.docx ny teny. Te-hamerina ny atin'ny antontan-taratasy ve ianao? Raha matoky ny loharanon'ity antontan-taratasy ity ianao, kitiho ny Eny.
Tsindrio ny bokotra "Eny" hamelana an'i Word hamerina ilay rakitra.
Raha tsy mahavita manamboatra ilay antontan-taratasy simba i Word, dia hahita ny hafatra fahadisoana fahatelo ianao. Ny antony amin'ny antsipiriany dia hiova arakaraka ny toe-javatra samihafa amin'ny kolikoly, ohatra:
(Antsipiriany: Tsy afaka manokatra an'ity rakitra ity ny Microsoft Office satria misy ampahany tsy hita na diso.)
Ireto ambany ireto ny santionany pikantsary ny hafatra diso:
Indraindray Word dia ho afaka mamerina ny atiny an-tsoratra avy amin'ilay antontan-taratasy maloto, saingy misy sary sasany tsy azo averina. Amin'ny tranga toy izany, azonao atao ihany koa ny mampiasa DataNumen Word Repair hamerina ireo sary.
Ohatra santionany rakitra rakitra Word Naroso tamin'ny alàlan'ny DataNumen Word Repair